AFRICOM oo qiimayn ku samaynaysa howlgalada Somaaliya – Radio Daljir
Luulyo 27, 2019 3:33 b 0
Taliyaha cusub ee ciidamada Maraykanka ee qaarada Afrika ee dhowaan xilka la wareegay Gen. Stephen J.Townsend ayaa sheegay inuu qiimeyn ku sameyn doono howlgalada ay ciidamada AFRICOM ka fuliyaan qaarada Afrika.
Gen Townsend oo fadhigiisu noqon doono dalka Jarmalka ayaa munaasabadii uu xilka kula wareegayay waxa uu ka sheegay inuu booqan doono toddobaadka soo socda qaarada Afrika gaar ahaan geeska Afrika oo ay ciidamada Maraykanka wajahayaan xaalado adag sida dalka Soomaaliya.
“Waxaan doonayaa inaan ku sameeyo qiimeyn buuxda waxyaabaha uu qabto talisku.”ayuu u sheegay Townsend Stars and Stripes.
Townsend ayaa bedelay Gen. Thomas Waldhauser, kaasoo howlgab noqonaya kadib markii uu saddex sano taliye ka ahaa AFRICOM oo howlgalo badan ka fulisay Soomaaliya,duqeyn cirka ah oo lagu qaaday Libya iyo weliba ciidamada Maraykanka oo la dagaalamay jabhado ka dhisan dalka Niger.
Sanadkii 2017, afar askari oo Maraykan ah ayaa lagu diley Niger,sidoo kale Milatariga Maraykanka ayaa xoojiyay howgaladii ay ka wadeen Soomaaliya halkaasoo ay ka fuliyeen illaa 46 duqeyn ah oo lagu qaaday xoogaga taabacsan Alqaacida ee Al-Shabaab iyo koox taageersan IS sanadkan oo kaliya.